फोहोरमा फालिएको बुलेट बाइक यसरी बन्यो भाइरल
२४ घण्टामा एक हजार ९६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि , १२ जनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्री देउवालाई वाढी पहिरोवाट पीडित परिवारलाई राहतको ब्यवस्था गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह
बसले माइक्रोलाई ठक्कर दिँदा अवरुद्ध भएको पृथ्वीराजमार्ग तीन घण्टापछि सञ्चालनमा
महाकालीमा फसेका पाँच जनाको २२ घण्टापछि सकुशल उद्धार
बझाङमा गएको पहिरोमा एकै घरका १८ सहित २३ जना बेपत्ता
कोरिया खोलामा आएको बाढीले बगाएर टुकबहादुरको मृत्यु
१२ दिनदेखि आमरण अनसन बसेकलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउँदै गृहमन्त्रालयका सहसचिव रेग्मी
आमिर खान मात्रै होइन यि हुन् अरुको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने बलिउडका चर्चित नायक
असोज २४ २०७८, आइतबार
एजेन्सी- फिल्म यादोकी बरादबाट बलिउडमा डेब्यु यरेका चर्चित नायक हुन् आमिर खान । उनि फिल्म यादोकी बरादबाटनै आफ्नो करियर अगाडि बढाएका हुन् । उनको त्यो फिलम खासै चल्न सकेन उनले पहिलो फिल्मबाटनै धेरै फ्यान कमाउन सफल भएका हुन् । उनको जन्म सन जन्म १४ मार्च १९६५ मा भएको हो ।
आमिर एक भारतीय चलचित्र अभिनेता, निर्माता, निर्देशक र लेखक समेत रहेका छन् । उनको बलिउडमा धेरै अभिनेत्री संग नाम समेत जोडिएको थियो आमिरको बलिउडमा धेरै प्रेमको चर्चा हुने गर्दछ उनले गजनि, इसीका नाम जिन्दगि, राख,दौलतकी जंग,अंदाज अपना अपना,आतंक ही आतंक, अकेले हम अकेले तुम, मेला, धोबी घाट, मा अभिनय गरीसकेका छन् । अमिर खानका यि फिल्म खासै चल्न सकेनन् । आमिर खानका दुई पत्नि समेत रहेका छन् ।
उनकी पत्निको नाम किरण खान उनले छोरा आजाद राव खानलाई आईभीएफ सेरोगेसी विधिबाट जन्माएकी हुन् । किरणलाई गर्भधारण गर्न समस्या देखिएपछि आफूहरुले यस प्रविधिको सहारा लिएको आमिरले बताएका थिए । आमिरको पहिलो श्रीमती रीना दत्तबाट दुई सन्तान समेत रहेका छन् । उनि अहिले आफ्नो बच्चका साथ जिन्दगि बिताएका छन् ।
शरीरमा मुसा आएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब
केराको फूलको सेवन गर्दा भाग्छन् यस्ता रोग
किन औँला चुस्छन् बालबालिका ? यस्तो छ कारण